Izindatshana zikaBonnie Crater zivuliwe Martech Zone |
Imibhalo nge UBonnie Crater
UBonnie Crater unguMongameli ne-CEO ye Okugcwele Circle Insights. Ngaphambi kokujoyina i-Full Circle Insights, uBonnie Crater wayeyiphini likamongameli wezokumaketha i-VoiceObjects and Realization. UBonnie ubephethe nephini likamongameli nezinduna eziphakeme zikamongameli kwaGenesys, Netscape, Network Computer Inc., salesforce.com, naseStratify. Umakadebona weminyaka eyishumi we-Oracle Corporation nezinkampani ezingaphansi kwayo ezahlukahlukene, uBonnie wayeyiphini likamengameli, iCompaq Products Division nephini likamongameli, iWorkgroup Products Division.
Ukuguqulwa Kwedijithali: Lapho ama-CMO nama-CIO ehlangana, wonke umuntu uyanqoba
NgoLwesithathu, Januwari 20, 2021 NgoLwesithathu, Januwari 20, 2021 UBonnie Crater
Ukuguqulwa kwedijithali kwashesha ngo-2020 ngoba kwakudingeka. Ubhadane lwenze ukuthi kube nezinqubo zokuqhelana nomphakathi ezidingekayo futhi kuvuselelwe ucwaningo lwemikhiqizo eku-inthanethi nokuthengwa kwamabhizinisi nabathengi ngokufanayo. Izinkampani ezazingenakho ukutholakala kwedijithali ezinamandla zaphoqeleka ukuthi zithuthukise ngokushesha, futhi abaholi bebhizinisi bathuthela ekusetshenzisweni kwesifufula sokusebenzisana kwedatha okwenziwe. Lokhu bekuyiqiniso esikhaleni se-B2B ne-B2C: Lo bhubhane kungenzeka ukuthi udlulise ngokushesha amamephu womgwaqo wokuguqulwa kwedijithali
Ukucabanga kabusha nge-B2B Marketing Outreach? Nakhu ukuthi ungayikhetha kanjani imikhankaso yokuwina
ULwesibili, May 19, 2020 ULwesine, May 21, 2020 UBonnie Crater
Njengoba abathengisi belungisa imikhankaso yokuphendula ekuweni komnotho kusuka ku-COVID-19, kubaluleke kakhulu kunanini ngaphambili ukwazi ukuthi ungabakhetha kanjani abawinile. Amamethrikhi agxile kwimali engenayo akuvumela ukuthi wabelane ngemali ngendlela efanele.
Imininingwane Yesekethe Ephelele: Ama-Funnel Metrics ne-Attribution ye-Salesforce
NgoMsombuluko, Februwari 11, 2019 NgoMsombuluko, Februwari 11, 2019 UBonnie Crater
Ezinkampanini eziningi, ukumaketha nokuthengisa akusebenzi ezingeni lokudlala elilinganayo. Imisebenzi yokuthengisa ye-B2B inezinhlelo zeCRM ezinjengeSalesforce ukukala ukusebenza, kufaka phakathi amamethrikhi wenkampani jikelele nemininingwane eyimbudumbudu yethimba nokusebenza komuntu ngamunye. Njengoba uhlelo lweCRM lusebenza njengohlelo lwamarekhodi wemali engenayo ezinkampanini eziningi, iqembu lokuthengisa linedatha ethembekile ku-C-suite. Amaqembu wokumaketha asebenzisa izixazululo ezahlukahlukene ze-martech ukwenza imikhankaso isebenze futhi
Ku-2018, Idatha Izokhulisa Umnotho Oqhamukayo
Ithemba lobuhlakani bokufakelwa (i-AI) lokushintsha yonke into yakha i-buzz enkulu emibuthanweni yezentengiso ngo-2017, futhi lokho kuzoqhubeka ngo-2018 naseminyakeni ezayo. Ukuqamba okufana ne-Salesforce Einstein, i-AI yokuqala ephelele ye-CRM, izonikeza ochwepheshe bezokuthengisa imininingwane engakaze ibonwe ngezidingo zamakhasimende, isize ama-support agents ukuxazulula izinkinga ngaphambi kokuthi amakhasimende azibone futhi avumele ukumaketha kwenziwe ngezifiso okuhlangenwe nakho kuze kube sezingeni ebelingenakwenzeka phambilini. Lezi zintuthuko zingumngcele oholayo we
Izambulo ezi-4 Ongazithola ngeDatha ye-Salesforce
NgoLwesibili, Agasti 18, 2015 NgoLwesine, Novemba 5, 2015 UBonnie Crater
Bathi i-CRM ilusizo kuphela njengedatha ekuyo. Izigidi zabakhangisi zisebenzisa i-Salesforce, kepha bambalwa abanokuqonda okuqinile kwedatha abayidonsayo, ukuthi yimaphi amamethrikhi okufanele awalinganise, avelaphi, nokuthi angayethemba kangakanani. Njengoba ukumaketha kuqhubeka nokuqhutshwa ngokwedatha, lokhu kukhulisa isidingo sokuqonda ukuthi kwenzekani ngemuva kwezigcawu ngeSalesforce, kanye namanye amathuluzi. Nazi izizathu ezine zokuthi kungani